Iwe unogona kundiratidza kuti ndingagadzira sei bhizinesi kumabhizimisi backlinks pasina rusununguko?
Zvakafanana nezvimwe zvipi zvacho zvekare zvakakonzerwa neSeO zvinangwa, bhizinesi kumabhizimisi backlinks zviri kuenderera mberi nechinangwa chimwechete - kuwana mhirizhonga inouya kune webhusaiti yako zvakananga kubva pakutsvaga kwehupenyu. Hapana chikonzero chokutaura kuti backlinks inoshandiswa neGoogle zvichida sechinhu chinonyanya kushandiswa. Ndicho chikonzero nei zvakakosha kubhadhara zvakakwana pakuvaka zvakakosha backlinks zvichange zvichitsigira mararamiro ako ose ekutsvaga uye kukurudzira urongwa hukuru. Ngatitarisei - kuvaka bhizinesi kumabhizimisi backlinks kunotora nguva yakawanda nesimba. Kunyange zvakadaro, zvinogona kunge zviri nyore kungotanga-uye zvishoma nezvishoma kuenda kutungamiri uye kutonga niche yako muIndaneti kutsvaga. Ingoenderera mberi nenzira idzi dzinoshamisa dzisingatarisirwi dzakataurwa pasi apa. Kana wangoedza ivo vose, ivai vakasununguka kushandisa kune imwe nzira ipi zvayo inonzwisisika yekuvaka bhizinesi kumabhizimisi backlinks kune webhusaiti yako. Saka, apa pane dzimwe nzira dzakawanda dzakanaka asi dzichiri dzakakosha kuita bhizinesi rebhizimusi rako risati rabuda mumakwikwi - pasina kushandisa penny.
Mitsara yeMunharaunda neBusiness Directories
Ndinokurudzira kushandisa zvinyorwa zvemashoko, webhutori dzewebhu, uye pakurongwa kwepaIndaneti se "guru" rinotanga kuvaka business backlinks. Icho chichava nzvimbo yakanaka kwazvo yakakwana yokuti utange kuwana kubudiswa kwepakombiyuta kwewebsite yako. Ichokwadi, vazhinji vezvikwata zvemhando dzemhando idzi vanonyatsonyatsotarisa mukati mekutsvaga injini dzakafanana neGoogle. Saka, zvose zvaunoda ndezvekuti utaure zita rako rebhizimisi nemafuta ekubatana uye uwane iyo yakakodzerwa shure kumashure. Mienzaniso yakanakisisa inosanganisira Google Bhizinesi Yangu, Yellow Pages, Yelp, Bing Business Listing, Truelocal, etc.
Nzvimbo idzi dzakawanda dzinobatsira zvikuru kuisa hukama hwakasimba paIndaneti yebhizimisi rako uye kuita kuti zita rako rive pachena kune vashumiri vakawanda. Zvese zvaunoda kubata zvimwe zvikwata pane zvekugadzirwa kwevanhu zvirikugadzira mapurogiramu evanhu vekambani yako - uye wapedza. Iva nechokwadi chekutarisira basa rakarongwa uye rinopfurikidza nemaprofesa ako emabhizimisi - usazeza kuisa imwe nguva nekunyora nguva dzose zvinyorwa kuti zvibudiswe nekunyorerana zvakananga kune webhizha rebhizimusi rako. Nenzira iyo, haugone kuwana zvinyorwa zvekare zvakare, asi unobatsirwa nepamusoro-soro webhutayo yewebhu.
Press Releases uye Guest Blogging
Kunyange zvazvo aya maitiro maviri ekare ekuchikoro mabhizinesi kumashure mabhizinesi anowanzotarisirwa nekuda kwechimwe chikonzero, ndinokushandirai zvakanaka. Kunyanya, iwe unogona kugara uchiwana mamwe mazita akadhindwa ekubudisa mawebsite ane nyota yezvinyorwa zvitsva. Chinhu chacho ndechokuti nehurukuro yakanyorwa yakanyatsonyorwa pane hurukuro inopisa inobatanidza nebhizimisi rako rezvebhizimisi kana misika yemusika - unogona kukurumidze kunongedzwa nevepanharaunda yepazuva rega uye yekuburitswa kwemashoko kwekusavaraidza nokukurumidza uye kupararira kwevanhu vakawanda. Kuparadzira nyika nemakabudisi enyu ehurukuro zvakanakisisa, ndinokurudzira kuisa pfungwa pakusimudzira chigadzirwa chitsva kana basa kuitira kuti backlink iratidze nzira kuenda kune webhusaiti yako yebhizimusi webhusaiti kuti uwane mamwe mashoko. Zvakanyanya kufanana nemakabudisi ekubudiswa kwemasvikiro, muenzi mabhogi akakodzera kushandisa imwe nguva - ichabhadhara zvirokwazvo! Ingotora zvose zvakabvumirana nemunhu ane simba kana kuti bhuku rebhulogi - uye shandisa nyaya yako yakakwana kuti uwane backlink in return. Cherechedza, kuti pakati peimwe nzira inofadza yekuvaka chikwata, mushanyi mabhogi ANOFANIRA kune avo vachitsvaga PR high backlinks ne DoFollow. Ingova nechokwadi chekuti uzonyorera bhajiki yakakosha yebhuku rine maP PR akakwana Source .